​भेट हुँदाचाहिँ अर्कै भनाइ « Jana Aastha News Online
​भेट हुँदाचाहिँ अर्कै भनाइ
प्रकाशित मिति : २८ पुष २०७४, शुक्रबार १३:५९
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक परिणाम यस्तो बनिदियो, भित्र–बाहिरका विपक्षीलाई टार्ने अस्त्र । नेपाली कांग्रेसभित्र निर्वाचनपछि चुलिएको असन्तुष्टिबारे छलफल गर्न हिजो मंगलबार शेरबहादुर देउवासँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल हुँदा रामचन्द्र पौडेलको माग थियो, कार्यसम्पादन समिति तत्काल भंग गरेर सबै पक्ष समेटिएको बनाउनुपर्ने ।
पौडेल र उनको पक्षका १४ नेताको सोमबार भेलापछि शेरबहादुर आफैँले चासो राखेर उक्त भेट गरेका हुन् । सोमबार रामचन्द्रपक्षीय भेलामा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवधारणापत्र तयार गर्न छलफल भएको थियो । सोमबारै कांग्रेसका सात युवा नेताले केही बुद्धिजीवीसँग छलफल गरे । पार्टीले नयाँ पुस्तालाई भरोसा गर्न नसकेको उनीहरुको आरोप थियो । भेलामा देउवा पक्षकै मानिने जीवन परियार र उमेशजंग रायमाझी पनि थिए । हिरेन्द्रमान प्रधान, डा. जीवराज पोख्रेल, डा. यज्ञ अधिकारी, पुरञ्जन आचार्य, पुरुषोत्तम दाहाल, होमनाथ दाहाल, जैनेन्द्र जीवन, डा.केदारनरसिंह केसी, मोहन ज्ञवाली, श्रीकृष्ण अनिरुद्र गौतम, अच्युत वाग्ले, डा.जुगल भुर्तेल, डा.विनय कुसियैत, डा. अञ्जनीकुमार झा, सुनील पोखरेल, गुणनिधी न्यौपानेहरु पनि थिए ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, गुरु घिमिरे, कल्याण गुरुङहरु अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन भएको भन्दै उनीहरुले ती युवाको विशेष भूमिकाका लागि माग गरेका छन् । हिजो शेरबहादुरसँगको छलफलमा रामचन्द्रले यी कुरामा जोड दिए । भेलामा ‘नेतृत्व लिन तयार छु’ भनेका रामचन्द्रले भने, ‘तपाईंले छोड्नुहुन्छ भने म संरक्षक भएर बस्न तयार छु । अब अर्को पुस्तालाई नेतृत्व नदिई हुँदैन ।’ रामचन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक छिटो बोलाएर यी कुरामा केन्द्रित हुँदै प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न पनि सुझाव दिए । तर, शेरबहादुरले राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक नटुंगिएसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाइने बताए ।
उता, कांग्रेस संसदीय दलको नेता को बन्ने भन्ने खेलो शुरु भएको छ । पार्टी सभापति पनि भएका कारण शेरबहादुर आफैँ नेता बन्नेमा छन् । तर, रामचन्द्र पक्षले प्रकाशमान सिंहलाई अगाडि सारेको छ । शेरबहादुरचाहिँ शशांकलाई समर्थन गर्नुमा आफ्नो हित देखिरहेका छन् । देउवाले ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई प्रमुख सचेतकमा अगाडि सार्न चाहेका छन् ।